About Us - uZigong City Ocean Art Co., Ltd.
UZigong City Ocean Art Co., Ltd. (obizwa emva koku ngokuba Ocean Art), yasungulwa ngo-2009, nto leyo ibekwe High-zobugcisa Industrial Park, uZigong City, kwiPhondo Sichuan, kwaye oko yinto ishishini ehlanganisiweyo yenzululwazi kunye nobuchwepheshe nto leyo ezizodwa kuyilo & uphuhliso, ukwenziwa, intengiso, kunye nemiboniso lweemveliso Ukulinganisa. Ocean Art ugxininise kuphando nokuphuhliswa iidayinaso animatronic, izilwanyana Ukulinganisa nezinambuzane, idayinaso amatye kunye zamathambo, izityalo yamandulo ngumntu, wangcwatywa intsimi kwakusembiwa kuyo, ubume omncinane kunye nokuhamba ingubo idayinaso kunye nezinye iimveliso Ukulinganisa.
Ocean Art ithatha indawo ngaphezu 10,000 square metres, kukho abasebenzi abakhoyo abantu abangaphezu kwama-100, sele iwupasisile ISO 9001: 2008 Inkqubo yolawulo lomgangatho ukuqiniszekiswa kunye BV kwezatifiketi yovavanyo mpahla, iimveliso idayinaso animatronic ufumene isiqinisekiso CE.
iimveliso zethu ezisebenzayo parks idayinaso umxholo, iipaki zokonwabisa, iindawo isayensi nethekhinoloji, iimyuziyam idayinaso, kudederhu lweevenkile, yokubutha kwamadoda omzi, Culture Villas, iiholide, imigubho, njl Singenile imarike phesheya ngoxa ugxininise kurhwebo lwasekhaya, kwaye banelungelo elizimeleyo kumazwe angaphandle urhwebo kunye nothotho eyenziwe ngayo iimveliso ziye kumazwe angaphandle imiboniso countries.The phezu 85 ukudunyiswa efudumeleyo evela abakhenkethi.
Ocean Art wayesoloko bamsukela lweshishini inkcubeko Ingqibelelo, Ubunjani, Service, Co-win, idala ubugcisa obutsha ophezulu, Obusemagqabini ubunjani, igama uphawu ngenxa kwishishini, kunye Ocean Art abantu basoloko Sikholelwa ukuba inkampani yethu iya kwenza igalelo nangakumbi le kushishino idayinaso yokulinganisa ihlabathi ngenxa yemizamo yethu wenkuthalo!
Mechanical Dinosaur, Dinosaur Train , Dinosaur World Near Me, Velociraptor Dinosaur, Kids Amusement Rides For Sale, Blue Robot Costume,